Published March 30, 2021 at 8:45 PM CDT
Siouxland District Health iyo Morningside Colleg waxay barri xarunta caafimaadka ee tallaalka ee COVID-19 u qaban doontaa ardayda iyo shaqaalaha xarunta Yockey Student Center. Subaxa hore ayaa isdiiwaangaliyay ballamada inta udhaxeysa 8:30 a.m. ilaa 10:15 a.m. Tallaalka waxaa maamuli doona ardayda ku jirta fasalka Caafimaadka Bulshada ee Morningside.
Magacyada laba xubnood oo ka tirsan Kooxda Iowa State Crew Club oo dhintay ka dib markii ay doonidii ay saarnaayeen kula degtay Little Wall Lake Axaddii waxaa soo saaray Xafiiska Sheriff ee Degmada Hamilton iyo Waaxda Booliska ee ISU.
Yaakov Ben-David oo labaatan jir ah wuxuu ahaa xisaabiye labaad oo xisaabeed ka yimid Washington, D.C. Sagaal iyo toban jir Derek Nanni, wuxuu ahaa takhasus kiimikada cusub ee Normal, Illinois.
Sharci dejinta Nebraska ayaa heli doonta fursad ay kaga doodaan sharci sharciyeynta xashiishada dawada kadib markii Gudiga Cadaalada ay u soo direen soo jeedinta dabaqa talaadada.
Guddigu wuxuu u codeeyay 5-2 si loogu diro nuqul ka mid ah sharciga wax looga beddelay Golaha Guurtida oo dhan. Sharciga ayaa u oggolaanaya beerista, ka shaqeynta, iyo adeegsiga xashiishadda dawada, wuxuuna xadidayaa inta qof uu yeelan karo iyo meelaha lagu isticmaali karo waxyaabaha xashiishadda ah. Waxay sidoo kale dejisaa qaab-sharciyeed iyo jadwalka ujrada waxayna abuurtaa guddiga kormeerka iyo waaxda fulinta.
Dadka degan Degmada Woodbury waxay bilaabi karaan inay isdiiwaan geliyaan xarumaha soo socda ee talaalka COVID-19 berri 3:00 galabnimo. Xarumaha…